Hogaamiyaha ururka Raaskamboni oo Dadka Kismaayo Ku Amray In Sameeystaan Aqoonsi Kenyaati Ah |
Hogaamiyaha ururka Raaskamboni oo Dadka Kismaayo Ku Amray In Sameeystaan Aqoonsi Kenyaati Ah
Nabadoon Kooshi oo kamid ah wax garadka ku sugan Kismaayo kana soo jeeda deegaanada Jubaland ayaa waxa uu daaha ka rogay in Axmed Madoobe iyo Ururuka uu hogaamiyo ee Raas-kanbooni ay bilaabeen in ay dadka ku amraan qaadashada aqoonsi uu sheegay in loogu magac daray (Kibaandho).
“Aniga oo ku sugan halkii aan ku dhashay da’na ah ayeey igu amreen in aan Kibaandho qaato. Waana ka diiday arintaasi. Innagu ma ajaanib ayaan nahay marka ay Kibaandhada noo sameynayaan? Misa innaga ayaa Kenya joogna. Kenya ayaa laga isticmaalaa Kibaandhaha. Arintaan waxa ay muujineysaa in Axmed Madoobe doonayo in uu Kismaayo ku daro dalka Kenya”, Nabadoonka ayaa ku waramay.
Soomaalida ku nool dalka Kenya ayaa waxaa marka Police-ku ay qabtaan waxa ay weydiiyaan in ay leeyihiin Kibaandhe oo af-Soomaaliga ku ah Sharci dal ku joog, waxaana muuqata in arintii oo la soo min guuriyay Kismaayo sideeedii loo keenay.
In kibaandha la sameeyo ma ah mid ay ka ka gaabsadaan hogaanka kooxda Raaskanbooni maadaama wasiirra dowlada Soomaaliya ka socda ay ku celiyeen garoonka Kismaayo iyaga oo sida ay war-baahinta u sheegeen ku yiri, “Kismaayo maamul ayaa ka jira mana idin doonayee halkiinna naga jooga”.
Kooshi ayaa, dhanka kale, waxa uu ka hadlay xayiraadii wasiirka gaashaan-dhigga iyo wufuudii uu hogaaminayay isaga oo yiri, “Wasiirkii difaaca ayaa ku xiran Kunteenar. Waxaas waa wax laga xishoodo. Kooxda Axmed Madoobe waxaan farayaa in ay ilaaliyaan sumcada Soomaalida”.
Si kastaba, Kibaandhahaan ay ku howlanyihiin kooxda Axmed Madoobe ee Kismaayo in ay maamulkeeda ku fara adeygaan doonaya iyaga oo iska indha tiraya baaqyada gudaha iyo dibada ka soo yeeraya ee lagu dalbanayo in dowlada looga danbeeyo wixii maamul sameyn ah.